सुविधा बोल्ने, सिमाना नबोल्ने ?
छिमेकीले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि इतिहासमै दर्जनौ तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरिसकेको छ । लामो समयदेखि देखिनै लिपुलेक क्षेत्र छिमेकीले आँखा गाडेको तर उसँग सो भूमि हडप्ने कुनै आधार प्रमाण नभए पछि हरेक पटकको नेपाल र भारतको बार्तामा सिमानाको बारेमा चर्चा चलाई रहने, बिबाद्लाइ बिबादैमा सिमित राखी भारतले अल्मल्याइ रहने, हाम्रो सरकार अलमली रहने भएछ । अहिले भारतले बाङ्गो औलाले घिउ निकाल्ने प्रयत्न ग¥यो, त्यस्तो चोर कार्यलाई बिफल बनाउन सरकारले नेपालको अध्याबधिक नक्सा पनि जारी गरेको हो । यसमा बिमति राख्नु भनेको राष्ट्रिय सीमा र स्वाधीनतालाई पहिलो प्राथमिकता नदिनु, नेपालमा सत्ता, सुविधा र सम्पत्तिलाई महत्व दिइनुको कारण नैतिक पतन हुनेछ ।
१९५० को सन्धि सधैं राजनीतिक मुद्दा बन्यो । नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसो पार्ने विषय पनि यही सन्धि हो । यो सन्धिलाई के गर्ने ? कसरी नेपाल भारतवीचका सम्बन्धहरु सुमधुर हुनसक्छन् भनेर नेपाल भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले प्रवुद्ध समूह गठन गरेका हुन् । २ वर्षको समयमा २–२ करोड खर्च गरेर प्रवुद्ध समूहले प्रतिवेदन पनि तैयार ग¥यो । यो प्रतिवेदनको फोटो कपी समूहकै एक सदस्यले भारतलाई र अर्को सदस्यले चीनलाई गोप्य रुपमा बुझाएको चर्चा पनि चल्यो । ती दुबै व्यक्ति पुरस्कृत भएको चर्चा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रै सुनिन्छ । हुन त मन्त्रिपरिषदको निर्णय तात्तातै विदेशीलाई सूचित गर्ने व्यक्तिहरु राजनीतिमा भएसम्म राजनीति सङ्लो र स्वाधीनता दह्रो हुनसक्ने सवालै भएन । आखिरमा लोकतन्त्रमा चेतना फैलियो, देशभक्तिको चेतनामा क्षयीकरण नै देखियो ।
तराई डुबानमा पर्छ, तराईका भूभाग अतिक्रमणमा पर्छन् । ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा परिसके, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकजस्ता रणनीतिक महत्वका नेपाली भूमिमा भारतले राजमार्ग नै बनाइसक्यो । अति भएपछि ओली सरकारले ती भूभाग नेपालकै हो भनेर अध्यावधिक नक्सा जारी गरेको छ । नक्साअनुसारको भूभाग हकभोगमा फिर्ता ल्याउने कहिले ? यसबारेमा मत बाझ्न थालेको देख्दा नेपाली स्वाभिमानमाथि विदेशी चलखेलको चर्को रुपको हदैसम्मको खतरा छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपाली भूमि मिसाएर नक्सा जारी गरेपछि युवा जागे, निर्णायक तह र नेतृत्व पक्ति त्यति जागेनन, जति जाग्नुपथ्र्यो । यद्यपि कोठामा सर्वसम्मति बनेको छ, त्यो सर्वसम्मति संसदमा देखिएन । यतिसम्म कि सांसदले नै भारतलाई सोधेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने, किन जारी गरेको भनेर प्रश्नसमेत गरिन् । यो छ संविधानको सपथ खाएका सांसदको चरित्र ? नेपाली भूमिका बारेमा दुबै देशवीच कूटनीतिक तहमा वार्ताको पहल भइरहदा भारतका सेनाप्रमुखले चीनको लहैलहैमा नेपालले फूर्ति लगाएको भन्नेजस्ता तर्साउने सैनिक भाषासमेत बोले ? नेपाललाई तर्साएर, फुटाएर भारतको हितमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने भारतको पुरानै बानी हो ।
नेपाली एकता प्रमुख सवाल हो । हामी एक भएमा कसैको हेपाह प्रवृत्ति सहेर बस्नुपर्दैन । तर हामी नै पराइका लागि विभिषण भइदिन्छौं, अनि पराइले हेप्नु स्वभाविक हो । जनतामा, युवामा कुट कुट भरिएको स्वाधीनता, माटो प्रेम जनप्रतिनिधिमा कम हुँदै गएको हो । यो खतरनाक विषय हो । १९७५ मा सिक्किममा नेतृत्व तहलाई भारतवादी बनाएर संसदबाटै पारित गराएर भारतले सिक्किमको स्वाधीनता भारतमा मिलाइदियो । देशभक्त सिक्किमेली जनताले हेरेको हे¥यै भए । केही महिना अघि नेपाल भ्रमणमा आएका सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले भनेका छन्– हामीसँग प्रजातन्त्र छ, देश छैन, नेपालसँग देश पनि छ, प्रजातन्त्र पनि छ, बचाउनोस् । अहिले विदेशी चलखेल बढ्दा नेपाली सार्वभौमिका रेडजोनमा परेका अनुभूति हुनथालेको छ । हाम्रा गल्तीले हामीलाई घरको न घाटको बनाउन सक्छ । सबै सचेत हौं ।